Isikhunta Ukwenza, Injection Molding, Plastic Izingxenye Molding - Mestech
Ukwenza isikhunta nokubumba umjovo
IMESTECH inohlelo oluphelele lokukhiqiza isikhunta sepulasitiki.
Metal izingxenye ukucutshungulwa
Ingxubevange yensimbi enhle kakhulu nezingxenye zokunemba okuphezulu kungatholakala.
Umkhiqizo ophelele ngokuqinisekile uqhamuka ekwakhiweni okuhle kakhulu kuqala.
Umkhiqizo omusha kusukela ekuqaleni kokuklanywa kukhiqizwa nokumaketha.
Kunezinkulungwane zemikhiqizo emakethe, evuselelwa njalo nsuku zonke.
IMestech yasungulwa ngo-2009, etholakala eShenzhen, isikhungo sezimboni esikhiqiza eningizimu yeChina. IMestech izibophezele ekwakheni isikhunta nasekubunjweni kwezingxenye zepulasitiki. Manje sandisa inkonzo yethu ekwakhiweni komkhiqizo, izinsimbi zokufa zensimbi, ukunyathela kanye nemishini. Siphinde futhi sinikeze amakhasimende insiza yokumisa okukodwa kusuka ezingxenyeni kuya komhlangano womkhiqizo ophelile.
Izingxenye zepulasitiki nezingxenye zensimbi nemikhiqizo esiyikhiqizayo ifaka izinkambu eziningi.Zifaka i-Industrial, Medical, Electronics, Electrics, Electricals, Auto parts, Home Appliances and Consumer products. Sihlala sikweqa okulindelwe yikhasimende lethu ngokunika amandla bonke abantu esisebenzisana nabo nokwakha isiko elamukela ukwenziwa ngcono, ukukhiqizwa kokuncika kanye nokusebenzisana kokuthengiselana ukuze kuqinisekiswe inani eliphakeme kumakhasimende ethu.
Izingxenye zepulasitiki zenziwa ngokubunjwa kwesikhunta nezinye izindlela zokucubungula, lapho ubukhulu nomsebenzi zihlangabezana nezidingo zabaklami. Ngaphezu kwe-80% yezingxenye zepulasitiki zibunjwe ngomjovo wokujova, okuyindlela eyinhloko yokuthola izingxenye zepulasitiki ezinemba kahle. Izingxenye zepulasitiki zomjovo nemikhiqizo ingene kuzo zonke izici zokwenza komuntu ...
Ukuze senze kahle ekwakhiweni nasekwakhiweni kwemikhiqizo yepulasitiki, kufanele siqonde izinhlobo nokusetshenziswa kwepulasitiki. IPlastiki luhlobo lwenhlanganisela ephezulu yamangqamuzana (ama-macrolecule) afakwa polymerized ngokufaka i-polymerization noma ukusabela kwe-polycondensation nge-monomer njengezinto ezibonakalayo. Kunezinhlobo eziningi zepulasitiki ezinezakhiwo ezahlukahlukene, kepha kulula ukukhanya ngesisindo, ...
Ibhokisi lepulasitiki lezokwelapha (elibizwa nangokuthi ibhokisi lomuthi) noma amabhokisi ezokwelapha epulasitiki, asetshenziswa kakhulu ezibhedlela nasemindenini. Ingasetshenziselwa ukugcina izidakamizwa, amadivayisi wezokwelapha noma ukuwaphatha ukubona iziguli. Ibhokisi lezokwelapha, njengoba igama lalo lisho, liyisitsha sokugcina imithi nezinto zokusebenza zezokwelapha, ezingakhishwa futhi zisetshenziswe uma kwenzeka kuba khona indawo ...
Ngokuthuthukiswa komkhakha wesimanje, kunezinto zepulasitiki ezanda kakhulu. Ngasikhathi sinye, imikhiqizo yepulasitiki nayo isetshenziswa kabanzi ezimbonini ezahlukahlukene. Ikakhulukazi, izingxenye zepulasitiki eziya ngokuya zisetshenziswa. Manje ake sabelane nawe ngamathiphu wokuklanywa kwezingxenye zepulasitiki eziqondile nokubumba. Ukuhlukaniswa kwezingxenye zepulasitiki ngokunemba: 1. Idizayini yepr ...